Shikhar Samachar | मानव शरीरमा देखिने डरलाग्दा ५ समस्या मानव शरीरमा देखिने डरलाग्दा ५ समस्या
प्रारम्भिक कालका एककोषीय जीव देखि अहिलेसम्ममा सहि शुक्रकीटले सहि अण्डालाई भेटेपछि मात्रै तपाईँको शरीरको अस्तित्व सिर्जना भएको हो। त्यसैले गहिरिएर सोच्ने हो भने, यति थोरै सम्भावना लिएर जन्मिँदा पनि हाम्रो शरीरमा त्यस्ता खराब विकारहरू नआउनु भनेको ठूलै आश्चर्यकै कुरा हो। नत्र तपाईँको जिनेटिक कोडमा अलिकति पनि दायाँबायाँ हुनेबित्तिकै शरीरको आकार र बनावट कस्तो हुन्छ भन्ने तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न।
तर कहिलेकाहीँ केहीकुरा गलत हुँदै जान सक्छन्, त्यो पनि हामीले सोँचेको भन्दा फरक तरिकाले! शुक्रकीट उल्टो गतिमा पौडिनु देखि लिएर पुरै छाला नीलो हुने समेत हुन सक्छ।
त्यसैले यस्ता अपव्यय हुँदा हाम्रो शरीरमा कस्ता प्रकारका विकारहरू आउन सक्छन् त?
१. कानको प्वालमा हड्डी पलाउनु
पौडिवाज र समुन्द्रमा सर्फिङ्ग गर्नेहरूलाई कान ढाक्ने सल्लाह दिइन्छ, ताकी उनीहरूको कानमा हड्डी पलाएर कान नै नटालियोस्! यस्तो अवस्थालाई ‘एक्जोस्टोसिस’ (Exostosis) भनिन्छ, जसको मतलब पहिल्यै भएको हड्डीमाथि अर्को हड्डी पलाउनु हो। जब कानको प्वालमा एक्जोस्टोसिस हुन्छ, त्यस्तो अवस्थालाई ‘सर्फर्स इयर’ (surfer’s ear) भनिन्छ, किनकी सर्फ गर्दा चिसो हावा र पानीले हुने जलनले गर्दा नै यस्तो अवस्था हुने गर्छ।
सहि उपचार नगरिएमा, बहिरो हुने, कान पाक्ने र धेरै पीडा हुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्दछन्। त्यसैले कान नढाकी पौडी खेल्ने र सर्फ गर्नेहरूमा यस्तो समस्या हुन सक्ने संभावना ८० प्रतिशत हुने अनुसन्धानबाट देखिएको थियो।
२. शुक्रकीट गलत दिशामा दौडिनु
विशेष गरी सम्भोगको क्रममा, वीर्यनली हुँदै पुरुषको वीर्य लिङ्गबाट बाहिर निस्कने गर्दछ। तर कुनै कुनै बेला, वीर्यले आफ्नो बाटो बिर्सने गर्दछ, जसलाई ‘ड्राइ अर्गाजम’ (dry orgasm) भनिन्छ। चिकित्सकहरूको भाषामा यस्तो अवस्थालाई ‘रेट्रोग्रेड इज्याकुलेसन’ (retrograde ejaculation) भन्ने गरिन्छ।
यदि वीर्यनली र मुत्रथैलीलाई छुट्याउने ढोकाले राम्रोसँग काम गर्न छाड्यो भने ड्राइ अर्गाजम हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा वीर्यलाई जुन बाटो जान सजिलो हुन्छ, त्यही बाटो जाने गर्दछ, यानिकी बाहिर निस्कनुको सट्टा मुत्रथैलीतर्फ नै लाग्न सक्दछ।
उच्च रक्तचाप, स्नायूप्रणालीमा समस्या र प्रजनन अङ्गमा समस्या भएमा ‘रेट्रोग्रेड इज्याकुलेसन’ हुने गर्दछ। कहिलेकाहीँ पुरुषहरूले वीर्य स्खलन रोक्नको लागि लिङ्गको मुख थुन्ने पनि गर्छन्, यस्तो बेलामा पनि वीर्य अर्कै बाटो जान सक्छ। यो अवस्था खासै खतरनाक त होइन तर बाँझोपना नहोस् भनेर पनि कतिले यसको उपचार गर्ने गर्छन्।
३. पुठो खस्नु
यो समस्यालाई सजिलो रूपमा बुझाउनुपर्दा ‘पुठो खस्नु’ नै भन्न सकिन्छ। हुन त यस्तो अवस्थालाई चिकित्सक भाषामा ‘रेक्टल प्रोल्याप्स’ (rectal prolapse) पनि भनिन्छ। जब हाम्रो मलाशयको भित्ता भित्री अङ्गबाट छुट्टिन्छ, तब आफ्नो ठाउँबाट सरेर मलद्वार हुँदै बाहिर निस्किने गर्दछ, यस्तो अवस्थालाई नै ‘रेक्टल प्रोल्याप्स’ भनिन्छ। यो सुन्दा एकैसाथ डर लाग्ने र हाँसो उठ्ने पनि हुन सक्छ, तर यस्तो कसैलाई पनि नहोस् भन्ने चाहनुहोस्, किनभने बयान गरेअनुसार यो अति नै पीडादायी र असहज हुने गर्दछ।
यसको उपचारको लागि, मलाशयलाई भित्र धकालेर सर्जरी मार्फत सिलाइन्छ। विशेष गरी दिशा बस्दा धेरै जोड लगाएमा, महिलाहरूको प्रसवावस्था लम्बिएमा अथवा कसैकसैलाई वंशाणुगत गुणले गर्दा पनि रेक्टल प्रोल्याप्स हुने गरेको पाइन्छ।
४. औँलाबाट नङ निस्कनु
आश्चर्यवश, यो हुँदा हामीले सोँचेजति दुखाइ नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यस्तो समस्यालाई ‘ओनिकोलाइसिस’ (onycholysis) भनिन्छ, जुन हुँदा नङसिरीबाट नङ छुट्टिएर खस्न थाल्दछ। कुनै दुखाइ बिना नै नङ खस्ने समस्या ‘ओनिकोलाइसिस’ हुने कारणहरू धेरै हुन सक्छन्। ब्याक्टेरिया, मर्चा, भाइरसको सङ्क्रमण, ड्रग र नङपालिसको एलर्जीले गर्दा यस्तो समस्या आउने अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
खुसीको कुरा के हो भन्दा, नङ त फेरि नि पलाइहाल्छ। यो समस्या निम्त्याउने कुनै क्रियाकलाप गर्नुभएन भने आफ्नो औँलामा फेरि पनि नङ देख्न पाउनुहुनेछ।
५. छाला नीलो हुनु
बेल्जियनका एक ‘कार्टुनिस्ट’को कल्पनामा आधारित ‘स्मर्फ’ (smurf) नीलो छाला त केवल काल्पनिक कुरा मात्रै हो, तपाइले हेर्नुपनि भयो होला ‘smurf’ फिल्म। तर वास्तविक जीवनमा पनि त्यसरी छालाको रङ नीलो हुनुलाई ‘आर्गिरिया’ (argyria) भनिन्छ।
यस्तो समस्या हुने मुख्य कारण भनेको चाँदीको धुलो र छालाको रसायनिक प्रतिक्रिया हो। लामो समयसम्म सिल्भर साल्ट (silver salt)को सेवन गरेमा पनि छालामा भएका पसिनाका ग्रन्थिहरूमा कालो-खैरो रङ्गका कणहरू जम्मा हुने गर्दछन्। जसले बिस्तारै छालाको रङलाई नीलोमा परिणत गर्दै लैजान्छ।
चाँदीको खानीमा काम गर्ने र चाँदीका भाँडावर्तन बनाउने मानिसहरूलाई यस्तो समस्याले धेरै सताउने गरेको पाइएको छ। विशेषतः मानव शरीरमा करीब १ ग्राम चाँदी पाइन्छ तर यदि त्यसको मात्रा ५ ग्रामभन्दा बढी भएमा आर्गिरिया हुन जान्छ। यसको उपचार हुन गाह्रै पर्छ, तर अझसम्म लेजरको मार्फतबाट एकजना व्यक्तिको मात्रै उपचार गरिएको पाइन्छ।